မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XIII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XIII
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XIII
Posted by Kyaemon on Sep 5, 2016 in Business & Economics, Community & Society, Education, Think Different, World News |3comments
ရေအားမှလျှပ်စစ်စွမ်းအားရယူနိုင်ရန် တရုပ်က အာဖရိက နိုင်ငံ တွေကို
ဘယ်လိုကူညိ နေလဲ ဆိုတာကို တင်ပြ ပါ့မယ်၊
တချိန်က ဥရောပ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့တို့ နဲ့ဂျပန်ဖက်ဆစ်တို့လို
နယ်ချဲ့သတ်ဖြတ်ဖိနှိပ်နေတာ မျိုး မဟုတ်ပါ၊
အခြေခံက ကုန်သယ် လုပ် ပြီး နိုင်ငံချင်း ကုန် ဖလှယ်လိုတာပါ၊
လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေး၊လူနေအိမ် အထပ်တိုက်တွေ၊ဆေးရုံတွေ၊
ဝိုင်းဝန်း တည်ဆောက် ပေးတယ်၊ ၎င်းတို့အတွက် ငွေချေးစိုက်ထုတ်
ရင်းနှီးပေးတယ်၊ခေတ်မှီ စိုက်ပျိုးရေး ပညာ အပါအဝင် ဆက်လက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ထိန်းသိမ်း
China Wins Africa Friends by Building Dam in Ebola Outbreak
bloomberg.com 2015-9-29 (နံမယ်ကျော် US စီးပွါးရေးသတင်းစာ)
ငါတို့ရဲ့စီးပွါးရေး အခြေခံအုတ်မြစ် (ရေအားလျှပ်စစ်) ကိုသူတို့က
လျှပ်စစ်စွမ်းအား မရှိရင် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း မ ဖြစ် ထွန်းနိုင် ပါ
“This gives usareal basis for our economy. Without power there is no development.“
As workers at Western companies fled West Africa during the world’s worst-ever Ebola outbreak,astate-owned Chinese company carried on. China International Water & Electric Corp. completed the Kaleta dam on budget andayear ahead of schedule in July, ending chronic power shortages in the capital, Conakry. Construction continued even as companies including London-based Rio Tinto Plc and Luxembourg-based ArcelorMittal SA paused projects in the region.
Ebola ပိုးကိုကြောက်လို့ ထွက်ပြေး ကြတဲ့ အနောက် တိုင်း အဖွဲ့တွေလို
မဟုတ်ပါ၊ တရုပ်တို့ကဆက်နေပြီး ရေကာတာ ကို တနှစ်ဆောအောင်
အပြီးလုပ်ပေးလို့ တရုပ်ကငါတို့ရဲ့စီးပွါးကို ကယ်တင်လိုက်တယ်Guinea နိုင်ငံ
ရေကာတာ အကြီးအကဲ Fofana ကဆို
“The Chinese saved us,” Lansana Fofana, 63, said, as he stood on the $526 million hydroelectric dam that China financed and he oversees. For Fofana, the 1,545-meter (5,069-feet) wall isamonument to the positive role China can play in Africa. In other parts of the continent, Chinese companies have been accused of treating workers poorly, building substandard infrastructure and damaging the environment.
“With Western companies, costs would have gone up and they would have walked out as soon as the first case of Ebola hit,” Fofana said as he walked beneathabuzzing pylon toward the barrier’s roaring overflow. “This gives usareal basis for our economy. Without power there is no development.”
တောင်အာဖရိက နိုင်ငံ ရေကာတာ အကြီးအကဲ နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြော မေးမြန်းခြင်း
OB: In China and elsewhere, many say one way to alleviate environmental pressures is to shift to small-scale hydropower as opposed to large-scale dams. What are your views on that?
အကြီးစား ရေကာတာ ဆိုးကျိုးပေးနိုင်သလောက်
အငယ်စား အလတ် စား ရေကာတာ တွေ ကလဲ
ပေးနိုင်တာပါ၊ ဒိထက်ပင် ဆိုးကျိုးပေးနိုင်တယ်၊
ရေတွေ လေလွင့်တာ အငွေ့ပျံတာတို့ ပိုများလာ၊
အိန္ဒိယလဲ က ဒီပြသနာ ကို တိတိကျကျ ထောက်ပြ နိုင်
MM: The evidence is that the proliferation of small-scale activity can do as much, and quite often more, damage than large-scale projects. In South Africa, we ban the construction of large numbers of small dams in some areas, because of the water inefficiency that they introduce, because of the additional evaporation. We know that problem has been identified in India as well.
ကွပ်ကဲဘို့လွန်စွာမှ ခက်ခဲလာြပီး သာမန်(ထုတ်လုပ်မှု)
စံညွှန်းကိုတောင် မ မှီနိုင်ဘို့များတယ်၊ (ထွက်သင့်
သလောက် မ ထွက်ပါ)
So I think that “small versus large” isacomplete red herring. You need to look then at the impact ofathousand small activities, and they are much more difficult to control and they are much more likely to be sub-optimal.
သွယ်ရေး မျိုးစုံတို့မှာ အကြီးsစားရေကာတာ က သာလွန်တယ်ဆိုတာ
ကျနော်ကThree Gorges ရေကာတာ ဆောက်လုပ်ဆဲနဲ့ဆောက်ပြီးလို့လည်ပတ်
I recently visited the Three Gorges. I visited it when it was under construction and I’ve now visited when it was in operation. Quite frankly, I think in terms of scale, in terms of the amount of green energy you’re getting, in terms of the improved transport efficiencies, in terms of flood control, in terms of all sorts of economic benefits, in terms of the local tourism and employment benefits, you can really look at that project and say look at the costs and look at the benefits. And those kinds of costs and benefits would probably not have been achieved in small-scale projects in the same way that they were achieved there.
စီးပွါးရေး၊ သဘာဝဝန်ကျင်၊ နဲ့ လူမှုရေး
မူသုံးမျိုး သုံးတန် ကို မျှတစွာလက်ကိုင်ပြုလာ
ရေ ဆိုတဲ့ သယံဇာတတွေကို အကျိုးရှိစွာ စီမံကွပ်ကဲ
သို့သော် အခြားနိုင်ငံ နဲ့ပူးပေါင်းပြီး ရေကာတာ တည်ဆောက်
ကူညီတဲ့အခါ ကျတော့ သဘာဝ ဝန်းကျင် ကို သိပ် အာရုံ
မ စူးစိုက် မ လွန်ကဲ စေချင်ပါ၊
“Small versus large” is an important discussion to have. But I think it would be more useful to look substantively at those three pillars – the social, the economic and the environmental – and try to make sure that they are balanced. And my impression is that China has made huge strides in 10 years towards rebalancing their water resource management discussion and I would be very sad to see them moving in the direction of too greatafocus on environment. Particularly if that’s then going to impact on their partner countries.
I find it interesting, and there is empirical evidence, that China’s re-focus has completely changed the dams and development debate. The anti-dam advocates are now turning most of their attention to China. They are very concerned about China, they are trying to influence it. I think we should be celebrating China’s contribution to African development in particular, even as we warn about the dangers of careless project implementation.
(Mike Muller isaSouth African water expert, engineer and writer on development issues. He is also commissioner at South Africa’s National Planning Commission andavisiting professor at the University of the Witwatersrand in Johannesburg;amember of the Global Water Partnership’s Technical Advisory Committee and an advisor to the UN World Water Assessment Programme. He was previously director general of South Africa’s Department of Water Affairs and Forestry.
Olivia Boyd caught up with him on the sidelines ofawater conference in Oxford, where he was speaking about China’s role in African hydropower development).
From The Third Pole.net
တရုပ် အရင်းအနှီး စိုက်ထုတ် လို့ဖြစ်စေ၊ဆောက်လုပ်ပေးလို့
ဖြစ်စေ ပါဝင် ကူညီ နေတဲ့ အာဖရိကတိုက်၂၂ နိုင်ငံက ရေကာတာ ဇယား
List of Chinese financed dams in Africa
China, through its Export and Import Bank, Sinohydro, China International Water & Electric Corporation (CWE), China and China National Water Resources and Hydropower Engineering Corporation (CWHEC); as well as China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation (CMEC); are fuelling the dam boom in Africa. Inanumber of cases, the construction of dams are endeavoured in areas of high biodiversity withoutaconcomitant Environmental and Social Impact Assessment. Notwithstanding, the following list, indicates the 22 countries in Africa where Chinese companies are financing and constructing dams or have plans to do so.
Cameroon Memve’ ele; Mekin
Central African Republic Boali 3
DRC Zongo II; Banunga; Ivunga; Semuliki,
Equatorial Guinea Djiploho,
Ethiopia Finachaa-Amerti Neshe; Genalle-Dawa III; Gilgel Gibe III; Tezeke; Chemoga Yeda; Gibe IV; Halele Werabesa
Gabon Grand Poubara; Belinga,
Ivory coast Soubre,
Mali Gouina; Taoussa,
Mozambique Mpanda Nkuwa
Nigeria Zungeru; Mambilla; Zamfara,
Republic of Congo Imoulou; Bouenza,
South Sudan Biden,
Sudan Upper Atbara; Merowe; Dal-Kajbar; Roseires,
Uganda Karuma ; Ayago; Isimba,
Zambia Kariba North Bank Ext; Kaufe Gorge Lower; Musonda; Lunza,
Zimbabwe, Kariba south Ext,
Source Brautigam, D. Hwang, J. &Wang, L. 2015. Chinese-Financed Hydropower Projects in Sub- Saharan Africa. Policy Brief. The SAIS China Africa Research Initiative.
China takes the lion’s share in electrifying Africa
Bui Dam in Ghana, Africa
Ghana ကBui ရေကာတာ
SubSahara ဆဟာရ သဲကန္တရ အောက် ပိုင်း အာဖရိက တိုက် ဒေသကြီး သို့
လျှပ်စစ် စွမ်းအား ၃ဝ % ထပ်တိုး လာအောင် တရုပ် ကုမ္ပဏီတွေက
ကြီးမားတဲ့ အခန်း ကနေ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေး တယ်လို့ IEA ကမ႓ာ့ စွမ်းအင် အဖွဲ့ကဆို
8 July 2016 | By GCR Staff (Global Construction Review)
Chinese companies are playing huge role in bringing electricity to sub-Saharan Africa and can take credit for 30% of new capacity in the region, according toastudy published this week by the International Energy Agency (IEA).
While more than 635 million people still live without electricity there, Chinese companies channeling state funds into all different types of power stations will have brought light and power to around 36 million people by 2020.
“African countries have relied heavily on China to support the expansion of their electricity systems, to enable growth and improve living standards”
– Paul Simons, IEA Deputy Executive Director
The sums are vast: the IEA finds that China invested around $13bn between 2010 and 2015 in power projects, as China’s contribution dwarfs that of any other non-African country.
Over half of all power projects are based on renewable sources, of which most are hydropower, the study, Boosting the Power Sector in Sub-Saharan Africa: China’s Involvement, reveals.
အာဖရိကနိုင်ငံတွေက ဓာတ် အားရဘို့အရေး
“African countries have relied heavily on China to support the expansion of their electricity systems, to enable growth and improve living standards,” said Paul Simons, the IEA’s Deputy Executive Director, on the report’s launch.
တရုပ်ကြောင့် လူဦးရေ ၃၆ သန်း လျှပ်စစ်မီးအားရလာပြီး
၂၀၂ဝ ကျရင် လူဦးရေ သန်းပေါင်း ၁၂ဝ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ရလာ
Between 2010 and 2020,atotal of 120 million people will have gained access to grid electricity. Thirty-six million of these, or 30%, will have done so thanks to Chinese contractors. China also provides off-grid power with solar energy kits donated in countries like Rwanda and Comoros.
အကြီးပိုင်း (အပြာရောင် အစိတ်အပိုင်) က ရေအားမှလျှပ်စစ် စွမ်းအား ပါ
Distribution of Chinese projects in power capacity, by sub-region, 2010-20 (IEA)
Benefits flow both ways. China’s involvement in Africa bolsters the internationalisation of Chinese companies, in line with the government’s “Go Out” policy initiated in 1999. Meanwhile, the current economic slowdown in China and overcapacity in various sectors further impels Chinese companies to search for new markets overseas.
There is alsoalong-term strategy behind China’s powering of Africa. The industrialisation and economic development of the region is seen by Chinese stakeholders as important for eventually bolstering Chinese exports to the region, the IEA says.
This is why the state plays suchalarge role. Over 90% of Chinese-built power projects in the region are contracted by Chinese state-owned enterprises (SOEs). Africa is the largest overseas market for some major Chinese energy infrastructure SOEs, which provide integrated services centred on turnkey projects.
Generally with Chinese government support, Chinese stakeholders provide integrated solutions – power generation capacity plus transmission and distribution – throughacombination of Chinese loans, government-driven investment and equity investment.
Headquarters of foreign contractors for greenfield power plants in sub-Saharan Africa, 2010-15
China’s approach to development assistance differs from OECD countries. For example, China is not covered by the Arrangements on Officially Supported Export Credits, which guides OECD countries in export credit financing.
In the 2010-15 period, loans, credits and foreign direct investment from China into the sub-Saharan power sector amounted to around $13bn, around one-fifth (20%) of all investments in the sector. Most of this financing comes from the Export-Import Bank of China.
IEA အရ တရုပ်ရဲ့ရေကာတာ ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစားရိတ် က (သူများထက်)
ပိုပြီးသက်သာ တယ်၊ ချွင်းချက်၊ တရုပ်ပြည်မှာဆောက်တဲ့ရေကာတာ ထက်
တော့ ပိုကုန်ကျတယ် (ခရီးစရိတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ခတွေ ပါမှာ)၊
According to the IEA, construction costs of power plants built by Chinese builders are lower overall than in other parts of the globe but higher than those for plants built in China.
လျှပ်စစ်စွမ်းအား မ ရလို့ လူဦးရေ သန်းပေါင်း ၆၃၅ (မြန်မာ ရဲ့ ၁၁ဆကျော်)ရဲ့
ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အပြင်းအထန် ဟန့်တားချုပ်နှောင် ထားတယ်၊
စက်ရုံလုပ်ငန်း၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး အလုံစုံ တို့က ပုံမှန်ရမဲ့ လျှပ်စစ် စွမ်းအား
ကို အမှီသဟဲ ပြုနေတယ်
Over 635 million people live without electricity in the region, which severely constrains economic growth. Manufacturing, healthcare and education all rely on reliable sources of electricity. The IEA also believes the lack of power also holds back the region’s agriculture sector, which remains unmodernised and accounts for 20% of regional GDP and 65% of employment.
Over 90% of Chinese-built power projects are contracted by Chinese state-owned enterprises (SOEs) (IEA)
Demand will only get more acute, according to the IEA. It says sub-Saharan electricity demand is expected to more than triple by 2040, to reach 1,300 terawatt hours (TWh) under current and proposed government policies and measures.
By 2040, demand from industry will double while residential demand will grow by more than five times current levels. Atarate of 6% per year, electricity demand growth will therefore exceed GDP growth throughout the next 25 years to 2040.
Chinese-added generation capacity mix in sub-Saharan Africa, 2010-20. Other renewables includes solar, wind, biomass and waste. (IEA)
On the plus side, it says, sub-Saharan Africa has ample primary energy resources to meet this demand: recoverable oil resources will be sufficient for the next 100 years, coal for over 400 years and gas for 600 years, and renewable energy sources (geothermal, hydro, wind and solar) are abundant.
To explore in more detail, view the report here.
Top Image: The Bui Dam,a400-megawatt hydroelectric scheme on the Black Volta River in Ghana, part-financed by China and built by Sinohydro (ZSM/Wikimedia Commons)
Africa’s New Friend China Financing $9.3 Billion of Dams for Hydropower When completed in 2013, Gibe III on Ethiopia’s Omo River will be Africa’s tallest dam,a$2.2 billion project .
When completed in 2013, Gibe III on Ethiopia’s Omo River will be Africa’s tallest dam,a$2.2 billion project that conservationists say will deprive birds and hippos of vital habitat. Some 600 miles (965 kilometers) to the north, Sudan is preparing to build the $705 million Kajbar dam on the Nile, which would inundate historic towns and tombs of the Nubian people…
Ethiopia ပြည်သူတဦးရဲ့ ဥဒါန်းကျူးရင့် ရင်ဖွင့်ခန်း
တရုပ်နိုင်ငံ ကို ကြိုဆို ဂုဏ်ပြု လိုက်တယ်၊
အာဖရိက တိုက်မှာ Ethiopia က အင်အားကြီးနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာပြီ၊
ရေပေါကြွယ်တဲ့ Ethiopia က လျှပ်စစ်စွမ်းအားပေါကြွယ် လာပြီး
( ရေနံပေါများတဲ့)Saudi Arabia လို မ ကြာခင် ချမ်းသာကြွယ်ဝ တော့မယ်၊
ဂျပန် ဂျာမဏီ တရုပ် အမေရိကန် တွေကEthiopia ကို လာပြီး စက်ရုံတွေ
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကျနော် တို့မှာ အရေးကြီးဆုံး အရာ နှစ်ခု
ရှိလို့၊ ဈေးပေါတဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအား နဲ့ သက်သာတဲ့ လုပ်အားခ
ကျနော်တို့ အားလုံး ကအလုပ်ရကြမှာ၊ တရုပ်နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုး လာတဲ့
ဘယ်သူက ဒီလိုဖြစ်လာအောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့သလဲ?
Ethiopia က ရေကာတာကြီးတွေ မ လုပ် ရအောင် ကျနော် တို့ရဲ့
ရန်သူတွေက အ နှစ် ၆၀ လိုက်တား ခဲ့တာ……
Comment by Ras Thomas
Hail to China !!!!!
The new super power which will
enpower Africa to share their
resources with those who used
to monopolize it.
Ethiopia the water of Africa will
be rich and African super power
soon. We will be Saudi Arabia of
electric energy in near future.
Japaness,German,Chiness, and the
American companies will came to
Ethiopia to built their factories
in Ethiopia. Because we have two
most important things they are l
looking for cheap energy and cheap
labour. our people will all have
jobs they need. that is the way
China itself was devoloped.
Who made that possible? Ethiopia
building big dams. that was what
our enemies was stopping us for
last sixty years…..
From Ethiopian News
Ehtiopia ကGilgel Gibe III ရေကာတာ ကို အောင်မြင် စွာ တည်ဆောက်
Ethiopia successfully completes Gilgel Gibe III dam
Tigrai Online, June 29, 2015
Against all odds the Ethiopian people and government has successfully completed one of the biggest mega projects, the Gilgel Gibe III hydro electric dam is done.
The Gilgel Gibe III dam is the second largest hydro eclectic dam in Ethiopia next to the Grand Ethiopian Renaissance Dam – GERD dam which is half way finished. Gilgel Gibe III isa610 meter-long or 2,000 feet and 243 meter or 797 feet high roller-compacted concrete dam. It will be producing 1870 Megawatt of energy. This huge dam will add almost 2000 megawatts of power to the national grid instantly doubling available power to the country.
( မြစ်ဆုံ က ၆၀၀ဝ မဂ္ဂဝတ် ထုတ်နိုင်တယ် ဆိုတော့ သူတို့ ထက် ၃ ဆ ပိုစွမ်း)
The Gilgel Gibe III project like all Ethiopian mega projects had encountered huge opposition by the prophets of poverty and enemies of the Ethiopian people. Groups like the International Rivers, Friends of Lake Turkana, The Oakland Institute, and other groups hell bent to keep the Ethiopian people begging for wheat flour forever campaigned relentlessly to stop the project until the end. These groups fabricated bogus claims of environmental damage to the local area and beyond. Those groups who are actually working for the interest of their western countries accused the Ethiopian government knowingly trying to hurt the people in the Omo valley.
Those foreigners who have absolutely nothing to do with Ethiopia or the people in the local area manufactured false information claiming the project threatens the food security and local economies of the Lower Omo basin people in southwest Ethiopia and along the shores of Kenya’s Lake Turkana, but nothing can be far from the truth.
The truth behind this special interest groups aggressive opposition to Gilgel Gibe III project is not because they care about the environment or the Omo Valley people. It is because they want Ethiopia to remain poor and destitute and the local people light years from civilization walking around naked for their amusement. They want their respective countries to suck our natural resources and row material dry and want to make our countryadumping ground for their toxic junk.
စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ Ethiopia အစိုးရ နဲ့ အကင်းပါးတဲ့ Ethiopia လူထု က
Fortunately the Ethiopian people are far smarter than this groups who are trying to stop our miracle transformation and determined to get out of abject poverty. Thanks to the Ethiopian people and the strong Ethiopian government the mega dam is finished and it will be inaugurated very soon.
Ethiopia: Chinese Hydropower Investments by CGGC SEPTEMBER 8, 2009 ￼
Ethiopian Prime Minister Meles Zenawi state that Ethiopia is welcoming Chinese enterprises to actively participate in Ethiopia’s development of hydropower projects and are welcome to help Ethiopia to make better use of its abundant water resources to generate electricity. Prime Minister Meles, who was co-chairman of the Beijing Summit of the Forum on China-Africa Cooperation in 2006 met this weekend in Ethiopia with visiting Mr. Yang Jixue, Chairman of China Gezhouba Group Corporation (CGGC).
တရုပ်အကူအညီနဲ့ Zambia က ရေကာတာ ကို စ တင် တည်ဆောက်
Zambia launches construction of China-aided hydro-power project
NOVEMBER 30, 2015 FROM XINHUA CHINA GO ABROAD Zambia launched on Nov. 28th the construction ofaChina-aided major hydro-power project, which will goalong way in boosting the country’s electricity generation capacity. The launch came after the signing ofamemorandum of understanding by the two governments for the commencement works on the development of the 750 megawatts Kafue Gorge Lower Hydro-power project last month.
Uganda က Isimba နဲ့ Karumba ရေကာတာ
၂ ခု စလုံး ကို တရုပ် ကန်ဟရိုက်တာ တွေရကြတယ်
Uganda has awardedaChinese firmacontract to buildanew dam and power plant on the Nile,asenior government official told Reuters on Monday, the second such project to go to China in less than two months. China, as elsewhere in sub-Saharan Africa, has rapidly expanded its investment in Uganda in recent years, snapping up major government contracts often after extending cheap credit.
ကျနော်တို့က အတိုးနှုန်းသက်သာ တဲ့ ချေးငွေ တွေကိုလိုက်ရှာနေတာ၊
တရုပ်နိုင်ငံက အဲဒီ ပိုက်ဆံရှိတာ
တရုတ်ကတော့ အလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ့်ပုံ။ ဆည်မြောင်းက စီမံကိန်းဆွဲထားတဲ့ ပုံရှိသေးတယ်။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ဆောက်ရင် ဒေါ်လာ ၈ဘီလျံ ကုန်မယ်ဆိုလား။ ၁ဝ နှစ်ကြာမယ်တဲ့။ ငလျင်ဒဏ်ခံပေါ့။ အဲဒါက ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ခက်တာကိုပဲ လုပ်စေချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူများအားကိုးရင် ကိုယ်ခါးကျိုးတာ များတယ်။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ပဲ ဆောက်နိုင်ချင်တာ။
Yes Strongly agree.
ကိုယ့်နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့လုပ်ရမယ်ဆိုရင် လုပ်ကိုလုပ်သင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် တိကျတဲ့ဥပဒေနဲ့ ပြန်လည်ထိန်းကျောင်းနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။
The Voice မှာ ပါတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါ
တရုတ် မြစ်ကျဉ်း သုံးသွယ် စီမံကိန်းကြီးရဲ့ အမှား
14-Sep-2016 tagged as စီမံကိန်း မြစ်ကျဉ်းသုံးသွယ်
တရုတ် အစိုးရ အဆက်ဆက်ဟာ မြစ်ကျဉ်း သုံးသွယ် စီမံကိန်းကို မှားတယ်လို့ ပြောဖို့ အင်မတန် ဝန်လေးပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် မကိုက်တာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုထင်ရှားလာပေမယ့်လည်း မူဝါဒ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ သူတွေ အနေနဲ့ တာဝန်ခံဖို့ အရမ်း ခက်ပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ အပြစ် ပြောချင်ရင်တောင် ခေါင်းခံမယ့်သူ ပြန်ရှာဖို့ ခက်သွားပါပြီ။ သို့သော် ရေကြီးတာကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီး ဆောက်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ဆည်ကြီးကပဲ ရေကြီးတာရော၊ မိုးခေါင်ရေရှားတာရော ထပ်ဖြစ်စေတယ်လို့ စွပ်စွဲသံတွေ ထွက်လာတာ ပိုကျယ်လောင် လာခဲ့ပါပြီ။
တရုတ်ပြည်ရဲ့ အရှည်ဆုံး မြစ်ဖြစ်တဲ့ ယန်ဇီမြစ်ဝှမ်း တစ်လျှောက်မှာနေတဲ့ တရုတ်ပြည်သူတွေဟာ မြစ်ရေ တိုက်စားတာကြောင့် ကမ်းပါး ပြိုတဲ့ဒဏ်ကို တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုပြီး ခံလာရပါတယ်။ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်မှာ ရေလွှမ်းမိုးမှုကို အများဆုံး ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီး ၁၉၉၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အကြီးဆုံး ရေလွှမ်းမိုးမှု ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဩဂုတ် လဆန်း ကြေညာချက်အရ ဇူလိုင်တစ်လလုံး ရေကြီးခဲ့တာကြောင့် ပျောက်ဆုံး သို့မဟုတ် သေဆုံး စုစုပေါင်း ၇၆၄ ဦးခန့် ရှိခဲ့ပြီး အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရသူပေါင်း ရှစ်သန်းကျော် ရှိပါတယ်။ အဲဒီ စာရင်းထဲမှာ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုရဲ့ ၂ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပဲ အာမခံကြေး ပြန်ရစရာ ရှိပါတယ်။ အချိန်မီ သတင်း မပေးလို့ဆိုပြီး ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ဒေါသ ထွက်ခဲ့တာတွေလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လယ်ယာမြေပေါင်း ဧက ၁၈ သန်းလောက် ထိခိုက် ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ် တစ်နှစ်တည်းကို ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုပေါင်း ကန်ဒေါ်လာ ၃၃ ဘီလီယံ ရှိပါတယ်။ လူပေါင်း ၁၁ သန်းလောက်အထိ နစ်နာခဲ့ပါတယ်။
ဒီစာရင်း အရှည်ကြီးဟာ တကယ်တော့ မိုးများတာချည်းသက်သက်ကြောင့် ရေကြီးတဲ့ဒဏ်ကို ခံရလို့ ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ဘဲ မြစ်ကျဉ်း သုံးသွယ် ရေကာတာကြီးကြောင့်လည်း ဖြစ်ရတယ်လို့ မြစ်ကြောင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်တွေ ပြောခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ရာသီဥတုကလည်း ပြောင်းလဲလာတာကြောင့် မြစ်ဝှမ်း တစ်လျှောက်က မြို့ကြီးတွေဟာ ပိုပြီး သဘာဝ ဘေးဒဏ်ကို ခံလိုက်ရတာနဲ့အမျှ ဒီဆည်ကြီးရဲ့ အသုံးဝင်မှုကို ငြင်းခုံ မေးခွန်း ထုတ်လာကြပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း မြို့ပြ ချဲ့ထွင်တာကို စည်းမရှိ ကမ်းမရှိ လုပ်ခဲ့တော့ ယခင် ရေနက်ကွင်းတွေ စိမ့်မြေတွေ မရှိတော့တာကြောင့် ရေစီးသွားစရာ နေရာ မရှိတော့ဘဲ လူနေ ဧရိယာတွေသာ ရေတွေ လျှံလာတဲ့ဒဏ်ကို ခံကြရတာကိုလည်း လေ့လာမှုတွေအရ သိရှိလာရပါတယ်။ အရင်ကတော့ မြစ်ကျဉ်း သုံးသွယ် ဆည်ကြီး ပြီးသွားရင် ရေမကြီးတော့ဘူး၊ ရေဘေးကနေ ကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ ပြောဆိုပြီး ဆည်ကြီးကို ဆောက်ခဲ့တာပါ။ မော်စီတုန်းလက်ထက်က မြစ်ဝါမြစ်ပေါ်မှာ ဆောက်တဲ့ဆည်ကို ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးလည်းဖြစ်၊ တရုတ်ရဲ့ အရှေ့မြောက်ပိုင်း ဗဟိုရေသယံဇာတ စီမံခန့်ခွဲရေး ဗျူရိုရဲ့ အကြံပေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ နာမည်ကြီး မြစ်ကြောင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် Huang Wanli ကတော့ မြစ်ကျဉ်း သုံးသွယ် ဆည်ကြီးဟာ နုန်းပို့ချမှု သိပ်များပြီး ပြည့်လျှံလာမည့်နှုန်း မြန်တာကြောင့် မကြာခင်တော့ ပြန်ပြီး ဖျက်ပစ်ရလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်း ထားခဲ့ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ ဒီစီမံကိန်းကြီးရဲ့ အပြစ်ကို ထောက်ပြတာကို ဆတ်ဆတ်ထိ မခံဖြစ်နေသေးတာကြောင့် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဒီဆည်ကြီးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရေးသားကြတာတွေကို ဆင်ဆာ ဖြတ်တာကလည်း တရုတ်အစိုးရရဲ့ အလုပ် တစ်ခု ဖြစ်နေပါသေးတယ်။
သို့သော်လည်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုဆိုးလာတဲ့ ယန်ဇီမြစ်ရဲ့ အခြေအနေက ဖုံးထားလို့ မရပါဘူး။ ဆည်ကြီးက ရေလွှမ်းမိုးမှုကို လျော့အောင် လုပ်ပေးနေပါတယ်လို့ အစိုးရရဲ့ ပြန်ကြားရေးဌာနကတော့ တွင်တွင် ပြောနေတုန်းပါပဲ။ နှစ်တစ်ရာအတွင်း အဆိုးဆုံး ဖြစ်မယ့် ရေလွှမ်းမိုးမှုမျိုးကိုတောင် ကာကွယ်ထားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ ရေကာတာကြီးကို ကာကွယ်နေတုန်းမှာပဲ တစ်ဖက်မှာလည်း ဝေဖန်သံတွေ ကြားလာရပါတယ်။ Tsinghua University က အင်ဂျင်နီယာဌာနရဲ့ ပါမောက္ခ Zhou Jianjun က ရေကြီးတာကို ကာကွယ်ဖို့ ဆည် တစ်ခုတည်းကို အားကိုးဖို့ဆိုတာ သိပ်အန္တရာယ် ကြီးလွန်းတယ်လို့ သတိပေးပါတယ်။ တရုတ် ကျွမ်းကျင်သူတွေထဲမှာတော့ ဒီဆည်ကြီးကြောင့် ဖြစ်တဲ့အန္တရာယ်ကို သိပေမယ့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ပြောဖို့တော့ နှုတ်တွန့်ကြပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဟိုအရင် မော်စီတုန်း ခေတ်မှာကတည်းက မြစ်ဝါမြစ်ပေါ် ဆည်ဆောက်တာကို ဝေဖန်တဲ့ ပညာရှင်တွေကို ရာထူးက ဖြုတ်ပြီး အလုပ်ကြမ်းနဲ့ နယ်နှင် ပစ်တာတွေ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ နိုင်ငံပါ။
ယန်ဇီမြစ်ဝှမ်းက ပြည်သူတွေ တဖြည်းဖြည်း သဘော ပေါက်လာတာကတော့ ဒီမြစ်ကျဉ်း သုံးသွယ် ဆည်ကြီးဟာ ရေလွှမ်းမိုးတာကို ကာကွယ်ဖို့ မဟုတ်ဘဲ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ လိုအပ်နေတဲ့ လျှပ်စစ်ကို ထုတ်ပေးဖို့သက်သက်ပဲ ဆိုတာကိုပါပဲ။ ဆည်ဆောက်တာ ကောင်းကြောင်း ပြောနေသူတွေကတော့ ဒီအချက်တွေကို ငြင်းဆန်နေကြတုန်းပါပဲ။ အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံတော် ကောင်စီ ဖွံ့ဖြိုးရေး သုတေသနဌာနက သုတေသီ ဝမ်ယီနမ်က ဒါတွေက ဆည်ကိုသက်သက် နာမည်ဖျက်တာလို့ တရုတ်စီးပွားရေး ရီဗြူးဂျာနယ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ တကယ့် အဖြစ်အပျက်ကတော့ ဆည်ကြီးထဲမှာ နုန်းအနည်တွေ များလာတာကို ဘယ်သူမှ မဖုံးနိုင်ပါဘူး။
နုန်းတွေ ဆည်ကြီးထဲမှာ အိုင်လာတာနဲ့အမျှ ဆည်ရဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ တည်နေတဲ့ ရေကြည်တွေချည်းပဲ မြစ်အောက်ပိုင်းကို စီးဆင်းသွားတဲ့အခါ ဒီရေကြည်စီးကြောင်းတွေက မြစ်ဘေး ကမ်းပါးတွေကို ခပ်မြန်မြန်ပဲ တိုက်စား ပစ်ပါတော့တယ်။ မြစ်ကမ်းပါဘေးက မြေသားတွေ ပြိုဆင်းလာတာနဲ့အမျှ မြစ်ကောလာ၊ ရေကြီးလာတဲ့ဒဏ်ကို ယန်ဇီမြစ်လယ်နဲ့ မြစ်အောက်ပိုင်းကလူတွေ သိသိသာသာ ခံစားလာရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် အနည်းငယ် အတွင်းမှာ နှစ်တိုင်းလိုပဲ မြစ်ကမ်းပါးပြို ရေကြီးတာက ပုံမှန်လို ဖြစ်လာနေပါတယ်။ Hubei နဲ့ Hunan ပြည်နယ်ကြားမှာဆိုရင် ၂ ဒသမ ၁ မီတာလောက် မြစ်ကြမ်းပြင်တိမ်သွားပြီး သဲတွေ ကုဗမီတာသန်းပေါင်း ၁၅ဝ လောက် ပြိုဝင်သွားတယ်လို့ အစိုးရကပဲ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက် အစိုးရအနေနဲ့ မြစ်ကြောင်းပြန်ပြင်ဖို့ကို သန်းပေါင်းများစွာ ပြန်ပြီးရင်းနှီး မြှုပ်နှံရပြန်ပါတယ်။
၂ဝ၂ဝ အထိ Hubei ပြည်နယ် တစ်ခုတည်းကိုပဲ မြစ်ကမ်း မပြိုအောင် ယွမ်ငွေ ၅ ဘီလီယံ သုံးစွဲရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို သုံးစွဲနေရပေမယ့် ခုချိန်ထိတော့ မြစ်ကမ်းပြိုတာကို ထိန်းနိုင်ဖို့ အဝေးကြီး ရှိပါသေးတယ်လို့ တရုတ် ရေသယံဇာတ အဖွဲ့က ဝေဖန်ပါတယ်။ ဆည်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ကုစားဖို့ ကုန်ကျရမယ့် စရိတ်တွေဟာ ဒါအစပဲ ရှိသေးတယ်လို့ တရုတ် ရေသယံဇာတ အဖွဲ့က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
မီဒီယာတွေမှာ အတိအလင်း ဝေဖန်မှုကို တားဆီးကြပေမယ့် အရင်ကတည်းက ဒီဆည်ကြီးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ပူပန်မိကြောင်း တရုတ်အရာရှိတွေ ကြားထဲမှာတော့ ကြားရလေ့ ရှိပါတယ်လို့ အီကော်နော်မစ် မဂ္ဂဇင်းက ရေးဖူးပါတယ်။ တရုတ်အစိုးရ အနေနဲ့ မှားယွင်းကြောင်း ဝန်မခံချင်ပေမယ့်လည်း ၁၉၉၂ မှာ အတိုက်အခံတွေ မရှိတဲ့ ရော်ဘာ တံဆိပ်တုံး ပါလီမန်ကနေ အတည် ပြုပေးလိုက်တဲ့ ပရောဂျက်ရဲ့ ဆိုးကျိုးကို မြင်နေကြရပါတယ်။ ၂ဝဝ၆ မှာ ပြီးစီးသွားတဲ့ ဒီဆည်ကြီးကို ဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေ ပိုပြီး ဆိုးရွား လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ ဆောက်လုပ်ရေးထဲ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အရာရှိတွေ ကိုယ်တိုင်က ဆည်ကြီးရဲ့ ရေလွှမ်းမိုးမှု ထိန်းချုပ်နိုင်အားကို အရှိထက် ပိုတွက်ခဲ့ကြတယ် ဆိုတာကို အရိပ်အမြွက်မျှ ပြောဆို လာကြပါတယ်။ ၂ဝ၁၁ မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာတော့ ဝန်ကြီးချုပ် ဝမ်ကျားပေါင် ကိုယ်တိုင်က ဒီဆည်ကြီးဆောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ အမှားတွေ ပါခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံပြောဆို ခဲ့ပါတယ်။
ဆည်ကြီးကြောင့် ရေကြီးတာ တစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘဲ မြစ်ကြောင်းထဲ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး၊ မြစ်ရေတင် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများနဲ့ မြစ်အောက်ပိုင်း ဒေသများအား ရေပေးဝေရေး လုပ်ငန်းများပါ ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဆောက်လုပ်နေဆဲ ကာလမှာပဲ ဒီဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာတော့မှာကို ကြိုမြင်ခဲ့ကြပေမယ့် အခြေအနေအရ တာဝန်ရှိသူတွေ အနေနဲ့ ထုတ်ပြောဖို့ ခက်ခဲခဲ့ကြတယ်။ ဝမ်ကျားပေါင်က ဝန်ခံခဲ့ပြီးချိန်မှာတော့ တရုတ် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လှုပ်ရှားသူ အုပ်စုတွေ အနေနဲ့ ပိုပြီး မချိတင်ကဲ ဖြစ်ကြရပါတယ်။ ခုတော့ နုန်းတွေ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုပြီး ဆည်ကြီးထဲမှာ သိုလှောင်ပြီးသား ဖြစ်ပေမယ့် ယန်ဇီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကို နှစ်စဉ် ပို့ချနိုင်မည့် နုန်းအနည်အနှစ် ပမာဏကတော့ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း လျော့သွားတယ်လို့ National Geographic မဂ္ဂဇင်းက ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
Ref: The Economist ( 2011). Choking on the Three Gorges: China’s government at last owns up to problems at its monster dam
SCMP (2016). Flood of doubts: sceptical public questions Three Gorges Dam’s capacity to stop disasters
Sullivan, L.R., 2007. Historical dictionary of the People’s Republic of China.Scarecrow Press.
National Geographic (2016). China’s Three Gorges Dam, by the Numbers